ရုံးနောက်ခံအကြောင်းအရာ | SAGA ASIA Consulting Co., Ltd.
SAGA ASIA Consulting Co., Ltd.
သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေနယ်ပယ်သည် ကောင်းစွာမတိုးတက်သေးသောကြောင့်မြန်မာကုမ္ပ္ပ္ပဏီများသည် မျိုးစုံသောအခြေအနေများတွင် များစွာသောပြဿသနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ကျွန်ုပ်သည်မြန်မာရှေ့နေများနှင့် ၂၀၁၂ခုနှစ်ကတည်းကအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၀န်ဆာင်မှုပေးစဉ်ကထက်ပို၍မြန်ဆန်စွာနှင့် ကျွမ်းကျင်စွာ အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုများကို နားလည်သဘောပေါက်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင်တစ်ခြားမည်သူကမှအမှုသည်၏လိုအပ်ချက်ကိုကျေနပ်အောင်မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏၀န်ဆောင်မှုကို စွမ်းရည်မြင့်မားသောဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ထားရန်သဘောပေါက်နားလည်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်ဆန်သောဝန်ဆောင်မှု (SPEEDY SERVICE) ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ဥပဒေ များသည်လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများထက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် အလျှင်လိုခြင်းသည်ပိုအရေးကြီး သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတစ်ခုချင်းဆီ ကုမ္ပ္ပ္ပဏီတစ်ခုချင်းဆီအလိုက်ထိုဖောက်သည်များအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဟုယူဆရသော အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ချက်များ(ADAPTABLE SERVICE) ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးစွမ်းပါသည်။ သို့သော်တည်ဆဲဥပဒေများအတွက်ဖြေရှင်းချက်များမပါဝင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုသည်များမေးမြန်းသောမေးခွန်းများနှင့်ပက်သက်၍ယခုချက်ခြင်းဆောင်ရွက်သင့်သောကိစ္စများကို ကမ္ဘာ့ရှုထောင့်မှနေ၍မိမိတို့ အမှုသည် အတွက်အကောင်းဆုံး ဟုယူဆရသောဝန်ဆောင်မှုပေးစွမ်းမှု များပေးစွမ်းပါသည်။(GLOBAL PERSPECTIVE)
တခြားသောဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများထက် ကျွန်ုပ်တို့ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းသည် အမှုသည်အမြင်ဘက်မှနေ၍ ၄င်းတို့၏စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကို သဘောပေါက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသောဝန်ဆောင်မှုများ (AMBITIOUS SERVICES)ပေးစွမ်းပါသည်။
First Myanmar Labour Law Guidebook is available now at Amazon!
Myanmar Labour Law Perfect Guidebook!
“Compliance of the developing countries in the front line: Myanmar/The risk in the Labor Law and the Anti-Corruption Law”, Jurist, the March 1, 2015 issue
TNY ဥပဒေဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အရင်းအမြစ်
TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.
မြန်မာ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အရင်းအမြစ်
SAGA ASIA Consulting Co., Ltd.( SAGA 国際法律事務所　ミャンマーオフィス ）